(ဆ)-စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များနှင့် စီမံကိန်းများချိတ်ဆက်မှု၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ ဖော်ထုတ်မှု၊ ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်မှု၊ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
(ဆ)-စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ စီမံချက်များနှင့် စီမံကိန်းများချိတ်ဆက်မှု၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ ဖော်ထုတ်မှု၊ ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်မှု၊ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ (၂၁. ၅. ၂၀၁၉)
စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုင်ရာ စီမံချက်များနှင့် စီမံကိန်းများချိတ်ဆက်မှု၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ ဖော်ထုတ်မှု၊ ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်မှု၊ စီမံကိန်းဘဏ်အတွင်း ထည့်သွင်း၍ ၎င်းစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက (Project Bank) စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကာလလတ်၊ ကာလရှည် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲချမှတ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းမဟာဗျူဟာများကို အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် နှစ်စဉ်စီမံချက်များ ရေးဆွဲကြရပါကြောင်း၊ စီမံချက်များကို ရေးဆွဲသည့် နေရာတွင် မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်များခွဲပြီး ရေးဆွဲကြသည်ကို မိမိတို့တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက နှစ်စဉ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လျာထားသော စီမံကိန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဘတ်ဂျက်ငွေတောင်းခံ တင်ပြလာသည့်အခါ ၎င်းစီမံကိန်းများသည် ဖော်ပြထားသည့် စီမံချက်ထဲက အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက စီမံချက်များရေးဆွဲသည့်အခါတွင်လည်း မိမိတာဝန်ရှိသည့် ကဏ္ဍတစ်ခု တည်းကိုသာ ဦးစားပေးစီမံချက်များ ရေးဆွဲသည့်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းနှင့် ကဏ္ဍအချင်းချင်း၏ ချိတ်ဆက်နိုင်မှုများ အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အပြင် မဟာဗျူဟာ စီမံချက်များကို ဘတ်ဂျက်နှင့်ထိရောက်စွာ ချိတ်ဆက်မှုပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ စနစ်တကျ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသည့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများကို ထိရောက်သည့် ဘဏ္ဍာငွေပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရန်အတွက် အခြေအနေများ ဖန်တီးပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများကို ဘတ်ဂျက်ငွေတောင်းခံမှုနှင့် ထိရောက်စွာချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး စီမံကိန်း ဘဏ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ် (Public Investment Programme) ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့ထဲတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းနှင့် လူမှုရေးပန်းတိုင်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များနှင့် စီမံချက်များ ပါဝင်ပါကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘုတ်အဖွဲ့ (Office of Investment Board) ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် စီမံကိန်းဘဏ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ထားပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် အရေးပါသည့် နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းများ၏ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ ဝင်ရောက်ကြည့်‌ရှုလေ့လာနိုင်သော Website အခြေခံ Data အဆောက်အဦးများနှင့်လည်း သိုမှီးထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
စီမံချက်များနှင့် စီမံကိန်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးမည့် စီမံကိန်းဘဏ်၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိရန်အတွက် ယခုအချိန်တွင် လိုအပ်လာပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းဘဏ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စီမံချက်များနှင့်‌ စီမံကိန်းများ ချိတ်ဆက်မှု၊ မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ ဖော်ထုတ်မှု၊ ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (က) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တင်ပြလာသော စီမံကိန်းများတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ယင်းစီမံကိန်းများကို စီမံကိန်းဘဏ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ထား သည်။ (ခ) နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများကို တိုင်းပြည်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု မဟာဗျူဟာနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရန်အတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်မည်။ (ဂ) နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ မြှင်‌့တင်ရန်အတွက် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံ (PPP) စီမံကိန်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားသည်။ (ဃ) ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများအနေဖြင့်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အဆိုပါ စီမံကိန်းများကို စီမံကိန်းဘဏ်တွင် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ (င) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေရရှိရန် တောင်းဆို တင်ပြလာသည့်အခါ စီမံကိန်းဘဏ်တွင် ပါဝင်သည့် စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက် အတည်ပြုရာတွင် မည်သို့ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်နှင့် စီမံကိန်းဘဏ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ကူညီပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုပါသောကြောင့် မေးမြန်းပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရတစ်ရပ်လုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမူဘောင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း Myanmar Sustainable Development Plan(MSDP) 2018-2030 ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထုတ်ပြန် ထားပါကြောင်း၊ MSDP ပါ မဟာဗျူဟာများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ စနစ်တကျ ဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈) ဖြင့် စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုတက်မှု စီမံကိန်း (MSDP) နှင့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်း အစီအမံများကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းများ ပါဝင်သည့် အများပြည်သူ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု အသုံးပြုနိုင်သော ဝက်ဘ်အခြေခံဒေတာ အဆောက်အဦ သို့မဟုတ် စီမံကိန်း အချက်အလက်များ သိုမှီးထားသည့်ဘဏ်ကို ဆိုလိုပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ MSDP နှင့် စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သိရှိဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ၂၇-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ လက်တွေ့လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူများကိုလည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂) ကြိမ် ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများက တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သီးသီးကို သွားရောက်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးမှုများလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်းများကို Project Bank တွင် ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များက အဆိုပြုလာသော Project Template များကို နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းများက သတ်မှတ်ထားသည့် စိစစ်ရေးဆိုင်ရာအညွှန်း (Screening Tool) ကို အသုံးပြုပြီး စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းများ မဟာဗျူဟာမြောက်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ MSDP နှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိ/မရှိတို့ကို ပထမအဆင့် Screening Tool ဖြင့် စိစစ်ပြီး စီမံကိန်းဦးစားပေးမှုနှင့် Source of Financing ကို ဒုတိယအဆင့် Screening Tool ဖြင့် စိစစ်ပါကြောင်း၊ ယခုလိုစိစစ်ပြီးနောက် မိမိတို့ Excellent, Good, Average, Deficient ဆိုပြီးခွဲခြားပြီး စီမံကိန်းများထွက်လာပါကြောင်း၊ အဆိုပါ အမျိုးအစားများကို Strategic နှင့် Non-Strategic ဆိုပြီး အမျိုးအစားထပ်မံ ခွဲခြားပါကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်ပေါ် မူတည်ပြီး နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများနှင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကို ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (DACU) နှင့် မိမိတို့ ချိတ်ဆက်ပေးပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စင်တာ (PPP Centre) နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါကြောင်း၊
ယခုလို စိစစ်ပြီးသည့်အခါ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် Score (ရမှတ်) ကောင်းသည့် စီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာငွေခွင့်ပြုနိုင်သည့်အပေါ် မူတည်ပြီး ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအတွက် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဗဟိုဌာန (PPP Centre) ၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို စိစစ်ပြီး လိုအပ်သလို ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကို Project Bank တွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကိုလည်း Project Bank တွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီး မေးမြန်းဆွေးနွေး ထားသည့်အတိုင်း ဘတ်ဂျက်တွင်ထည့်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆင့်ဆင့်လည်း စိစစ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုလျှင် အဆိုပါ စီမံကိန်းများသည် မဟာဗျူဟာမြောက် စီမံကိန်းများ ဖြစ်သည့်အကြောင်း လွှတ်တော်ကိုတင်ပြ အသိပေးအကြောင်းကြား ညှိနှိုင်းပြီးမှ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထက်ပါကဲ့သို့ စီမံကိန်းဘဏ် (Project Bank) ဆိုင်ရာ စီမံချက်များနှင့် စီမံကိန်းများ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဦးစားပေးနယ်ပယ် သတ်မှတ်မှု၊ ဘတ်ဂျက် သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ သို့မဟုတ် PPP ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ပေးမှုတို့ကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် မိမိတင်ပြ ခဲ့သည့်အတိုင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။